Những Thông Tin Về Dây Cúc Tần ấn độ Không Thể Bỏ Qua | Hatgiongtihon.net - trung tâm cung cấp hạt giống tí hơn
Những Thông Tin Về Dây Cúc Tần ấn độ Không Thể Bỏ Qua | Hatgiongtihon.net
Đang Đọc: Những Thông Tin Về Dây Cúc Tần ấn độ Không Thể Bỏ Qua | Hatgiongtihon.net in Hatgiongtihon.net
Indian daisy chain sisityalo esijingayo esikhula ngamandla sinamagqabi aluhlaza unyaka wonke; banamagqabi awongezelelweyo akhula kumatyathanga amahle amade enza isigqubuthelo sendalo esifana nesilika eluhlaza; Izikhuselo zomoya ukusuka kwilanga elirhabaxa lasehlotyeni kwaye zinesiphumo esihle kakhulu sokucoca umoya, ezisa umoya opholileyo.
Ichrysanthemum yaseIndiya ikhula kwibalcony yeterrace
Ngemini eshushu yasehlotyeni; uyacaphuka! Ufuna isisombululo ukunceda indlu yakho ukuba ipholile kwaye ibe nomoya ngakumbi. Ukunceda indawo yakho yekhaya ukuba ikhululeke ngakumbi, ingabi shushu kakhulu; kufuneke u- Ukukhula kwe-chrysanthemums yaseIndiya.
Iichrysanthemums zaseIndiya zityalwe ukwenza umthunzi
Oku kuthathwa njengesisombululo esikhulu ukuzisa inzuzo ekutyaleni njengomthi wokugubungela; ukuthintela ukukhanya kwelanga ngqo eludongeni; inceda ukugcina indawo ipholile kwaye ihlaziyekile, idala ukuziva ukhululekile kuye wonke umntu kusapho. Masifunde ngakumbi malunga Iintlobo ze-chrysanthemum zaseIndiya oku!
Iichrysanthemums zaseIndiya zityalwe ukuhlobisa iivenkile zekofu
1 Ulwazi malunga netsheyini yedaisy yaseIndiya ayinakungahoywa
1.1 Malunga netsheyini yedaisy yaseIndiya
1.2 Iimpawu zetsheyini yedaisy yaseIndiya
1.3 Intsingiselo yomtya wechrysanthemum yaseIndiya
1.4 Ukusetyenziswa kwe-chrysanthemum yaseIndiya
1.5 Ungayikhulisa njani i-chrysanthemums yaseIndiya
1.6 Ungayikhathalela njani i-chrysanthemums yaseIndiya
1.7 Ungayithenga phi ichrysanthemum yaseIndiya eHanoi?
Ulwazi malunga netsheyini yedaisy yaseIndiya ayinakungahoywa
Ngoku, I-chrysanthemum yaseIndiya Sisityalo esithandwa kakhulu esilinywa kwiindawo ezininzi ezifana nezi: Indlu; indawo yekhefi; indawo yokutyela; ihotele; indawo yabakhenkethi; indawo yokuhlala iindawo zokuzonwabisa;… Ngenxa yokuba zizityalo zokuhlobisa ezinokukhula kwaye ziphuhlise ngokukhawuleza, ukuzisa indawo eluhlaza kwikhaya lakho. Makhe Hanoi Bonsai Funda kabanzi malunga nesi sityalo ngenqaku elingezantsi.
Malunga netsheyini yedaisy yaseIndiya
Indian daisy chain Kwaziwa nangamanye amagama afana nala: I-chrysanthemum yaseIndiya; Imidiliya yechrysanthemum yaseIndiya, iintambo zomkhusane we-bamboo, imithi enentloko yesilivere, iintambo ze-arrowroot. Igama labo lenzululwazi ngu IVernonia elliptica, bentsapho yakwaCuc; khula ecaleni kwentambo. Sisityalo esihlala sikhula eIndiya. Banegama elinjalo ukwenza kube lula ukwahlula kwezinye iintlobo zeentambo kunye nokudala into ekhethekileyo yelizwe laseIndiya.
Umtya wechrysanthemum waseIndiya utyalwe ukwenza umthunzi
I-chrysanthemum yaseIndiya unamandla okukhula kwaye aphuhlise ngokukhawuleza nangokuhle kakhulu. Inomthi obhityileyo oluhlaza kodwa inokufikelela kwi-30m ubude. Zizidiliya ezinomthi kwaye zikhula kumatyholo. Imizimba yabo iluhlaza okwesibhakabhaka xa bebancinci; Xa isityalo sikhulile, siya kuba mnyama omnyama. Kuhlala kukho inwele ekhanyayo engwevu-mhlophe emzimbeni. Xa zikhula ngokulinganayo, zifana neekhaphethi zendalo eziluhlaza ezijinga kwiindonga zendlu.
Umtya wechrysanthemum waseIndiya ukutyala ukukhanya kwesibhakabhaka
Iimpawu zetsheyini yedaisy yaseIndiya
Amasebe kunye namasebe e-chrysanthemum yaseIndiya khululeka emhlabeni kancinci; bhetyebhetye. Ijongeka ngathi yingxangxasi ebhulowu enzulu egalela ezantsi ukusuka phezulu. Indinika imvakalelo epholileyo kwaye enomdla ngokwenene. Anamagqabi angqindilili kwaye aluhlaza unyaka wonke. Amagqabi amile okweqanda, malunga ne-3-10 cm ubude, anemisila etsolo kunye ne-obtuse. Iipetioles zimfutshane, kunye nomda ongeyo-serrated.
Ingakumbi kwi I-chrysanthemum yaseIndiya Oko kukuthi, abalahlekelwa ngamagqabi abo ngokwasemzimbeni ebusika. Yenza amaqabunga ahlale ephila kwaye akhule kakuhle njengokungathi ahlobisa umfanekiso ngombala oluhlaza ogcwele ubomi. I-chrysanthemum yaseIndiya intyatyambo engalunganga kakhulu. Esi sityalo sineentyatyambo ezikhula kwi-panicles, pink pink. Iqela lentyatyambo ngalinye lisuka kwi-5m ukuya kwi-15cm ubude, kuxhomekeke kubungakanani bentyatyambo nganye, enkulu okanye encinci.
Apho ukuthengisa iichrysanthemums zaseIndiya ngobuninzi
Iintyatyambo zohlulwe zibe ngamasebe ama-5, ubude obuphakathi ukusuka kwi-5mm ukuya kwi-6mm. Iintyatyambo ze-chrysanthemums zaseIndiya zimile okweqanda, emva kokuqhakaza, zenza imilo yentsimbi ekhethekileyo, iboshwe kancinci embindini wentyatyambo.
Ukuthengisa iichrysanthemums zaseIndiya ngobuninzi
Intsingiselo yomtya wechrysanthemum yaseIndiya
I-chrysanthemum yaseIndiya ngumthi omele ubomi obude, amandla kunye nokunyamezela. Kuba esi sityalo sihlala siluhlaza kwaye sikhula unyaka wonke. Ngaphandle koko, abanalo uphawu lokutshintsha amagqabi ebusika. Zonke izinto zenza ixabiso elikhethekileyo lalo mthi.
Iichrysanthemums zaseIndiya zityalwe egadini
Amagqabi ahlala eluhlaza kwaye anamathele kunye, enza iindonga zechrysanthemum zaseIndiya ezikhethekileyo zifanekisela ukuncamathela, ubumbano kwaye zenza amandla ekunzima ukuba ubani awatshabalalise. .
Iichrysanthemums zaseIndiya zityalwe ukuze zibe nomthunzi ngasentshona
I-chrysanthemum yaseIndiya hlala uvelisa, uchume kwaye uzise ubuhle obutsha. Yenza wonke umntu azive ekhululekile kwaye engenaxhala. Ulindele ntoni ukuba awukhangeli kwesi sityalo kwangoko?
Kwi-feng shui, I-chrysanthemum yaseIndiya ayizisi nje ubuhle obutsha kwindawo yokuhlala kodwa nayo Izisa ithamsanqa elininzi, itsala ukuchuma kwaye izisa amandla amahle ebomini.
Iichrysanthemums zaseIndiya ezikhula kwiimbiza ezijinga kwibalcony
Ukusetyenziswa kwe-chrysanthemum yaseIndiya
I-chrysanthemum yaseIndiya zityalwe kakhulu esangweni lendlu, ivenkile yekofu; Udonga; indawo yabakhenkethi; bhenela ukunceda indawo yakho yekhaya ibe nomoya kwaye ihlaziyeke.
I-chrysanthemum yaseIndiya ikhula kwibalcony yendlu
Ukuba ukhetha ukukhula esi sityalo ngaphakathi kwindlu, ngoko kufuneka uzityale kumgangatho ophezulu, phezu kophahla ukuze amasebe kunye namasebe abo axhonywe ukuze enze indawo ekufutshane nendalo. Kwangaxeshanye, banceda ukugcina indawo yangasese ingaphazanyiswa okanye iphazamiseke nabani na.
I-chrysanthemum yaseIndiya Ikwanesakhono sokuhluza umoya kakuhle kakhulu, ifunxa ityhefu esemoyeni, kwaye ilinganise ukufuma kwendawo yokuhlala. Ukongezelela, nazo ziyikhaka kwindalo ekhusela ngokufanelekileyo ukushisa kwehlobo kwaye igubungela ngokufanelekileyo umoya ebusika.
I-chrysanthemums yaseIndiya ityalwe phambi kwesango
Ungayikhulisa njani i-chrysanthemums yaseIndiya
Ukulungisa umhlaba wokutyala: Sisityalo esilungele iindidi ezininzi zomhlaba, kulula kakhulu ukukhula kwaye kulula ukuphila. Uhlobo lomhlaba onokuthi ulukhethe ngumhlaba okhululekileyo otyebileyo ngezondlo, otsalwe kakuhle. Ukuba utyala izityalo ezimbizeni, kufuneka udibanise umgquba nomhlaba ukuze ukhulise izityalo.
Ukukhula kwe-chrysanthemums yaseIndiya
Izithole: Isasazwa ikakhulu ngokusikwa. Khetha amasebe ekhekhe lobukhulu obuphakathi, uze unqumle amasebe abe ngama-30cm ubude. Emva koko zicwilise kwisisombululo seengcambu (N3M) malunga nemizuzu eyi-15 phambi kokuba uzityale emhlabeni.
Ungatyala njani: Ukuba uzikhulisela ezimbizeni, kufuneka ubeke umaleko wegrabile ezantsi embizeni ukunceda isityalo siphume kakuhle. Emva koko faka umhlaba malunga ne-1/3 yembiza. Qhubeka ubeka umaleko wesichumisi esixutywe nomhlaba uze ufake amasebe ambalwa e-chrysanthemum yaseIndiya. Ekugqibeleni, sasaza umaleko omncinane weendiza ukugcina umhlaba ufumile.
I-chrysanthemums yaseIndiya ityalwe emthunzini
Indawo yokutyala: Ngokuqhelekileyo ubeke i Iimbiza zechrysanthemum zaseIndiya kwibalcony, iterrace okanye isityalo esingaphezulu. Ukunceda umthi unokuxhoma ukwenza indawo entle ngakumbi endlwini yakho. Ngaphandle koko, unokuphinda ubeke indawo ekulungeleyo kuba lo ngumthi okwaziyo ukumelana nelanga elithe ngqo okanye imozulu eshushu, ngoko ke kungakhathaliseki ukuba iphi na, iya kukhula kakuhle.
Iichrysanthemums zaseIndiya zityalwe kwithafa
Ungayikhathalela njani i-chrysanthemums yaseIndiya
Isibane: Sisityalo esikwaziyo ukumelana nobushushu. Ngoko unokuzityala elangeni elithe ngqo okanye kwiindawo ezinomthunzi I-chrysanthemum yaseIndiya zikhula kwaye zikhule ngokwesiqhelo.
Iimfuno zokukhanya ze-chrysanthemums
Ubushushu: ziyakwazi ukumelana namaqondo obushushu aphezulu kakhulu okanye aphantsi (8°C – 10°C), zisenokuphila ngokwesiqhelo ngaphandle kokuchaphazela amagqabi kunye nokuvuthuluka.
Ubushushu obufanelekileyo kwi-chrysanthemums yaseIndiya
Ukufuma: Zizityalo ezithanda ukufuma, ezikhula kakuhle kakhulu kwi-70% ukuya kwi-90% yokufuma. Okanye xa ukufuma kungaphantsi kwe 40%, umthi usenako ukuwunyamezela.
Ukufuma kufanelekile kwi-chrysanthemum yaseIndiya
Umhlaba: Esi sityalo asikhethi mhlaba, sikhula kuzo zonke iindidi zomhlaba. Nokuba umhlaba womile, unamatye, uhlwempuzekile kwizondlo, bangakwazi ukuziqhelanisa.
Umhlaba wokukhulisa iichrysanthemums eIndiya
Amanzi okunkcenkceshela: Emva kokutyala, kufuneka zinkcenkceshelwe ngokukhawuleza ukuphepha ukubuna kwimozulu eshushu. Kwizityalo ezivuthiweyo, kufuneka unkcenkceshele rhoqo kanye ngosuku ehlotyeni, kwaye unciphise ukunkcenkceshela ebusika.
Iimfuno zamanzi okunkcenkceshela kwi-chrysanthemums yaseIndiya
Isichumisi: Ngokukhula okukhawulezayo kwe-chrysanthemum, inkqubo yokuchumisa ibaluleke kakhulu kwinyanga, kufuneka uchumise isityalo kunye namaxesha angama-1 ukuya kuma-2 e-organic fertilizer. Malunga neenyanga ezi-2, uxuba i-2 grams yesichumisi se-NPK (10-5-5) ukongeza isichumiso kwizityalo. Ukubakhuthaza ukuba baphume kwaye bancede amagqabi ahlale eluhlaza, kunqande ukutyheli.
Imfuno yaseIndiya yesichumiso sechrysanthemum
Ukongeza, unokuchumisa umgquba obolileyo ukusuka kwi-1 ukuya kumaxesha ama-2 ngonyaka ukuze ukhule ngcono kunye nophuhliso lwezityalo, uncedo olukhulu, namagqabi, amasebe amade kunye nokuthopha ngakumbi.
Ungayithenga phi ichrysanthemum yaseIndiya eHanoi?
Hanoi Bonsai Kuliwonga ukuba yinkampani ekhethekileyo ekuboneleleni ngazo zonke iintlobo zemidiliya kunye nemidiliya, kubandakanywa Intambo yechrysanthemum yaseIndiya EHanoi. Ngaphezulu kweminyaka engama-20 yamava kwishishini, sihlala sijonge ukuzisa abathengi bethu elona xabiso lilungileyo.
Ukubonelela ngetsheyini yedaisy ye-indian
Iqela labasebenzi abanamava, abanomdla, abazinikeleyo kunye nabanobuchule kunye nabasebenzi abanonophelo bahlala beqinisekisa ukwaneliseka kwabathengi. Abathengi banokukhetha kwiindlela ezininzi ezahlukeneyo zokuthenga ngefowuni, iodolo ye-intanethi okanye uthenge ngokuthe ngqo egadini.
Ukuthengisa iichrysanthemums zaseIndiya ezishibhile eHanoi
Ukongeza, sikwabonelela ngeenkonzo zokwakha ukutyala imithi yeziqhamo egadini ukunceda abathengi bafumane ezona zityalo zanelisayo.
Ngentla kukho inqaku elimalunga nolwazi olunxulumene nesityalo saseIndiya ichrysanthemum Hanoi Bonsai ithunyelwe kuni bafundi. Sinethemba lokuphendula eminye yemibuzo yakho malunga nesi sityalo.
Indawo yokuthengisa i-chrysanthemum yaseIndiya
Ngaxeshanye, Hanoi Bonsai Kukho neembiza ezininzi ze-chrysanthemum yaseIndiya elinde ukuba undwendwele kwaye ukhethe ezona mbiza zifanelekileyo zokutyala kunye nokunyamekela. Ithamsanqa kukhetho lwakho kunye nokujonga Iimbiza zechrysanthemum zaseIndiya yiba mhle!
Bán cây Cung Điện Vàng, ý nghĩa phong thủy và chăm sóc | Hatgiongtihon.net
Cây cúc tần Ấn Độ: tác dụng, cách trồng, chăm sóc, mua ở đâu? | Hatgiongtihon.net